Sharpspring: Yakakwana uye Inodhura Kutengesa uye Kushambadzira Kwekushandisa Platform | Martech Zone
Sharpspring: Yakakwana uye Inodhura Kutengesa uye Kushambadzira Kwekushandisa Platform
Chipiri, Gunyana 22, 2020 Chipiri, Gunyana 22, 2020 Douglas Karr
SharpSpring inosanganisa kushambadzira otomatiki uye CRM mune imwechete yekupedzisira-kumagumo mhinduro yakagadzirirwa kukura bhizinesi rako. Nzvimbo yavo-yakapfuma chikuva chine zvese zvaunoda uye zvimwe zvekuwedzera kutengesa & kushambadzira otomatiki: hunhu-hwakavakirwa email, mushandirapamwe wekutevera, ane simba kumhara mapeji, anovaka blog, magariro enhau kuronga, akangwara chatbots, CRM & yekutengesa otomatiki, inesimba fomu muvaki, kushuma uye analytics, isingazivikanwe mushanyi ID, nezvimwe
Iyo chikuva chiri kushandiswa neSMBs uye Enterprise makambani, asi SharpSpring's vatengi vevatengesi ndevemajeri edigital nekuti ivo vanopa mutengesi / chena-chitambi chirongwa icho chave chinova purofiti-yepamusoro peanopfuura 1,200 ejeri edhijitari kutenderera pasirese. Ivo vanopa akawanda akati wandei maficha maficha, anosanganisira anokwanisa kushambadza interface, emazhinji-makasitoma manejimendi, kuroorwa kusaina-uye, uye zvimwe.
Isu takashandisa Act-On uye HubSpot tisati taenda naSharpSpring. Iwo mamwe mapuratifomu akanaka akanaka, asi SharpSpring yakatibvumidza isu kuve neakawanda masimba pamusoro pevatengi vedu maererano nekubatana, kubhadharisa, uye kuronga dhizaini.
Raymond Cobb III, JB Media Boka
SharpSpring Zvimiro Sanganisira
enamel - Isa kumagumo kunofinha, kuwanda email kuputika, uye chengetedza nguva pane yako nzira yekutengesa. Tanga hurukuro dzinotungamira kukutendeuka nemishumo yakasarudzika uye nematanho akazvimirira anopindura maitiro emushandisi. Shandisa iyo SharpSpring email kushambadzira chikuva kuteedzera inotungamira "mushure mekubaya." Kusiyana nevamwe vanopa email basa, isu tinopa yakadzama analytics pane kwese kusangana - kuti iwe ugone kutumira iro rakakodzera meseji panguva chaiyo, uye wotumira rako rekutengesa timu kuti iite nekuita chaicho-nguva ziviso.
Forms - Vaka, gadzirisa, uye reorder minda zvisina basa neyakajeka dhonza-uye-inodonha mupepeti. Eedu mafomu akasimba anozvipedza ega minda yeanozivikanwa vashanyi yekuvandudza kutendeuka uye kutaridzika kwakakura pane chero saiti ine tsika CSS. Unogona kunyange mepu minda kubva kune vechitatu-bato uye echinyakare mafomu.
kushandisa michina - Yedu ine simba, iri nyore-kushandisa yekuona yekushambadzira yekuvaka inorerutsa kushambadzira otomatiki. Shandisa branching logic kuti uite zvinongedzo munzvimbo dzakakomba munzendo dzavo dzekutenga dzakasiyana. Pakarepo kuyananisa ruzivo neyedu yakavakirwa-mukati kushambadzira otomatiki CRM suite. Seta manotsi emutengi kune ako zvigadzirwa uye masevhisi, wobva wagovera zvinotungamira kune akasiyana manas kuitira kuti iwe ugone kutumira otomatiki akanongedzera mameseji. Gamuchira rondedzero yeinopisa yezuva rimwe nerimwe inotungamira chaiko kubhokisi rako rekunyora, uye ita panguva chaiyo chaiyo kuti uvashandure vatengese. Shandisa SharpSpring's yekushambadzira otomatiki maturu ekumisikidza anotungamira anoenderana nekubatana, peji rekutevera, kukwana, uye zvimwe - ivo vanokonzeresa mukuzvarwa kwekutungamira kuora kwenguva.
Kuzivikanwa Kwevashanyi - VisitorID ndechimwe chezvombo zvakavanzika mudura redu rekushambadzira matomati maturusi. Chishandise kuona kaviri sevashanyi vazhinji kune yako saiti (zvichienzaniswa nemakwikwi ekushambadzira mapuratifomu). Shandisa hunhu-hwakavakirwa yekutevera kuti unzwisise zvechokwadi zvinokurudzira kubaya kwese. Ziva marwadzo uye nzira dzakabudirira kuitira kuti webhusaiti yako isazombomira kugadzirisa. Gamuchira rondedzero yeinopisa zuva inotungamira yakananga kuinbox yako, uye chiite panguva chaiyo chaiyo yekushandura izvo zvinotungamira kukutengesa.
CRM - Ruzivo isimba - uye CRM ndeyekutengesa. Shandisa yedu yekushambadzira otomatiki CRM kana musone kusanganisa yako yaunofarira CRM mupiki neiyo SharpSpring yekushambadzira chikuva. Chengetedza data rakabatanidzwa kumusoro nekumhanyisa pamwe nekukurumidza nzira mbiri-kuwiriranisa. Tevedza mikana kubva mukusika kusvika pakuvhara neziso reshiri rinotarisa pombi yako. Gadzira tsika dhizaini matanho, minda, mafirita, uye zvimwe, kubata kutengesa zvisina basa needu ekushambadzira matomati maturusi.
Mapeji ekutumira - Vaka masimba ane simba ekumhara uye ekumisikidza peji faneli dzinoshandura vashanyi kuita zvinotungamira. Shandisa yedu yakapusa-uye-tinya mupepeti kuti ugadzire yakasarudzika mapeji ekumhara, kana gadzirisa template kubva kune yedu yakakura raibhurari. Gadzira maketani emapeji akabatanidzwa ekumhara kuti uronge vashanyi mumatanho akasiyana. Dhiraivha dzimwe shanduko ine zvine simba zvewebhu zvemukati zvinoshanduka zvinoenderana nezvinodiwa nevashanyi uye hunhu. Endesa mhedzisiro nekukurumidza pasina kukodha kana musimudziri, uye usingabate webhusaiti yako - asi kune avo vanoda yakazara kutonga, unogona kuwedzera yako HTML uye CSS kodhi kuti ugadzirise mapeji kunyangwe zvichiwedzera.
Blogs - Vhura bhurogu mumaminetsi neye blog anovaka uye mupepeti mune yedu yekushambadzira otomatiki system. Dhizaini, gadzirisa uye ubudise machira zviri nyore. Gadzira kubatana mukati mechikwata chako, kana gadzira maprofiles ekugamuchira vashanyi mabloggi. Wedzera kusvika kweako zvemukati neRSS email syndication iyo inongotumira matsva matsva kune ako tsamba yekutumira. Wana zvakawanda kusvika kunze kweako zvemukati nema social media mawijeti ayo anotendera vashandisi kugovana nekukutevera pamhepo. Shandisa SharpSpring's yekushambadzira otomatiki maturu kuteedzera vashanyi, tsvaga kuti ndezvipi zvirimo zvinoita zvakanakisa, uye tarisa mbiru kuti uwedzere kutendeuka.
Kushambadzira Analytics - Ita sarudzo dzakakosha nedhata rakaringana. Sarudza metric yakakosha pamushandirapamwe wega wega uye meseji, wobva wagadzira mishumo yetsika kuti uone maitiro ako. Nzwisisa magumo-kumagumo ROI uye uteedzere masosi anotungamira - kunyangwe kubva kunze. Goverana kiyi ruzivo neboka rako, vatengi, uye vatengi mune inoverengwa uye inowanika kuratidzwa.
Kubatanidzwa - Unganidza kumazana evatatu-bato software vanopa neSharpSpring's APIs uye Zapier kusangana. Sync data neako ekushambadzira otomatiki CRM masystem, chengeta ako zvemukati manejimendi masisitimu akagadziridzwa, uye ubatanidze yemuno uye yechitatu bato mafomu ewebhu needu ekushambadzira chikuva. Chokwadi ita SharpSpring iwe pachako nekudzosera maemail, zviziviso, mishumo, uye kunyangwe iyo app pachayo. Chengetedza dhata pane yedu yakavharidzirwa, yakachengeteka, uye inotyisa chikuva.
Zvemagariro Midhiya - Enda kupfuura kutsikisa, kuronga, uye kuongorora. Chinja kudyidzana munharaunda kuve nhaurwa dzinogutsa dzinogadzira kutengesa uye dzinoratidza mumishumo yako yekutengesa. SharpSpring Yemagariro inopa zvese maficha iwe aunotarisira kubva kune yemagariro manejimendi mhinduro, pamwe zvine simba maturusi maturusi iwe aunogona chete kuwana kubva kune yakazara-yakasanganiswa yekushambadzira chikuva. Trigger automated workflows uye zvibodzwa zvemagariro zvinotungamira zvinoenderana nekubatana, masosi, zvido uye zvimwe. Edza kupera-kusvika-kumagumo ROI emisangano inoshambadzira yekushambadzira uye uratidze kukosha kwesimba rako rezvenhau.
Tora SharpSpring Demo
kuburitsa: Isu tiri mubatanidzwa we SharpSpring uye varikushandisa zvakabatana maratidziro mukati meichi chinyorwa.
Tags: APIblog chikuvamutengi wehutano hwehukamaEmail Marketingnezvimirokushambadzira analyticsmarketing automationkushambadzira otomatiki chikuvasharpspringsharpspring socialsocial media chikuvachiratidzo chevashanyi
Nyowani Domain Yakajairika Kuratidzira (Regex) Inodzoreredza MuWordPress